नमुना सामुदायिक वनको साधारणसभामा जेष्ठ, अपाङ्ग सम्मान - Pahilo Online
नमुना सामुदायिक वनको साधारणसभामा जेष्ठ, अपाङ्ग सम्मान
लेटाङ । लेटाङ–३ स्थित नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको २१औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा ९० वर्षमाथिका जेष्ठ र शारिरिक असक्त (अपाङ्ग) लाई सम्मान गरेको छ । समूहले आज (सोमबार) कार्यालय परिसरमा सम्पन्न साधारणसभामा उनीहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरप्रमुख शंकर राई र अन्य अतिथिले ९० वर्षमाथिका ४ जना जेष्ठ, ३ जना अपाङ्ग, ३ जना बहिरा, ७ जना एकल महिला, पूर्व सञ्चालक तथा टोली प्रमुख र कर्मचारीलाई सम्मान गरेका हुन् । जसमा जेष्ठ उपभोक्ता ९३ वर्षिया धनमति राई, ९२ वर्षिय आशबहादुर मगर, ९१ वर्षिय कर्णबहादुर भुजेल र ९० वर्षिया रामशोभा राईलाई नगद एक हजार सहित दोसल्लाले सम्मान गरिएको थियो । यस्तै शारिरिक अपाङ्ग विष्णुमाया गिरी, पूर्णमाया मगर, आरती चम्लागाईलाई नगद ५ हजार सहित दोसल्लाले सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, बहिरा गोमा राई, शोभा दर्जी, ध्रुव राईलाई नगद एक हजार सहित सम्मान गरिएको हो । नमुना सामुदायिक वनले पूर्व सञ्चालक तथा टोली प्रमुखहरुलाई पनि सम्मान गरेर आउने पुस्तालाई नयां सन्देश दिएको छ । सम्मानित हुनेहरुमा मिरा कार्की, विमला ओझ र ३६ जना टोलप्रमुखहरुलाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रमका अवसरमा समूहले एकल महिलाहरुलाई समेत नगद एक हजारका दरले ७ जनालाई सम्मान गरेको छ । जसमा दुर्गाकुमारी लिम्बु, हेमकुमारी श्रेष्ठ, विष्णु माया श्रेष्ठ, लिलाकुमारी लिम्बू, देवीमाया लिम्बु, गोमा कोराङ्गी र दिपिला राई रहेका छन् । वन समूहले वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा कार्यालय सहायक निर्मला घिमिरेलाई सम्मान तथा विदाई गरेको छ भनें दुई जना वन हेरालुलाई समेत सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख शंकर राई प्रमुख अतिथि, सहायक वन अधिकृत दिपेश मिश्र, फेकोफन प्रदेश नं. १ का सचिव अग्नी पौडेल, सचिवालय सदस्य रेणुका दाहाल, वैज्ञानिक वन सरोकार सञ्जाल मोरङ अध्यक्ष दिलाराम राई, फेकोफन लेटाङ नगर महासंघ अध्यक्ष आनन्दसागर तिम्सिना, ३ नं. वडाध्यक्ष देबराज चाम्लिङ राईलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आम्दानीको २५ प्रतिशतले वन विकासका कार्यहरु गरेको छ । जसमा प्राकृतिक प्रकोप तथा आगलागीबाट वन जोगाउन अग्नी रेखा निर्माण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको कुपहरु, समूहको कम्पाउण्ड र घाटगद्दि वरिपरि वन्यजन्तुले खाने आहारको रुपमा ६ हेक्टरमा विभिन्न जातका फलफुल, जडिबुटीको विरुवा रोपण गरिएको छ । वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रमा बेला–बेला सफाई तथा गोडमेल गर्ने गरिएको समूहकी सचिव उर्मिला श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् । यसैगरी, आम्दानीको ३५ प्रतिशतले गरिवी न्यूनिकरणका कार्यहरु गरिएको छ । सचिव श्रेष्ठका अनुसार घरबार विहीन विपन्न उपभोक्ताहरुलाई नमुना बस्ती निर्माण गर्नका लागि जमिन खरिद गरिएको छ । यस्तै विपन्न विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने विरन आधारभुत विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरिएको, उपचार अभावमा छटपटाईरहेका उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक सहयोग, कोभिड–१९ ले संक्रमित उपभोक्ताहरुलाई फलफुल तथा पोषिलो खानेकुराका लागि नगद ११२०।– का दरले ४० घर परिवारलाई राहत प्रदान, वन विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग, विपन्न ६५ घर परिवार उपभोक्ताको स्वास्थ्य वीमा समेत गरिएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस्तै, सामाजिक विकास तर्फ समूहले विभिन्न टोलका कालोपत्रे सडक, खेल मैदान, क्लब, संघ–संस्था, विजुली बत्तिका लागि सहयोग गरेको छ ।
साधारणसभामा समूहका अध्यक्ष भिमबहादुर देवानले भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा समूहले वन पैदावरको आम्दानीबाट मात्र सिमित नरहेर जिविको पार्जन कार्यक्रमको लागि पर्यापर्यटन तथा उद्यम क्षेत्रबाट पनि आम्दानीको श्रोत जुटाई बेरोजगारलाई रोजगारको अवसर र पहुँच पुगोस भन्ने उद्देश्यले विरन खेलमैदान छेउको ५ हेक्टर जमिनमा नमुना पुतली पार्क निर्माण गर्ने बताए । जम्मा २०४ दशमलब ८५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको नमुना सामुदायिक वनका उपभोक्ता घरपरिवार संख्या ५६६ रहेका छन् ।
नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा वन तथा भु–संरक्षण विभागबाट गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारमा सान्तवना स्थान प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ ।
सोमबार, २९ कार्तिक २०७८, २२:०५ November 15, 2021 मा प्रकाशित